Bartlett muhurukuro neEmirates Airlines Kusuma Special Flight kuenda kuJamaica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Bartlett muhurukuro neEmirates Airlines Kusuma Special Flight kuenda kuJamaica
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett (kurudyi) achikwazisana neMutungamiriri Mukuru weEmirates Airlines Commerce Operations - Americas, Salem Obaidalla, zvichitevera musangano une pundutso pamuzinda wekambani iyi kuDubai. Mumusangano, wakaitwa muna Gumiguru 24, vakakurukura nezve mukana wekuunza sevhisi yakakosha pakati peDubai neJamaica, mukupemberera Zuva reJamaica paDubai Expo 2020, iri kucherechedzwa muna Kukadzi 2022.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, aburitsa pachena kuti akatanga nhaurirano nevamiriri vepamusoro veEmirates Airlines, nedonzvo rekuunza ndege yakasiyana pakati peDubai neJamaica kutanga kwegore rinouya. Chiziviso ichi chinouya apo Minister vakapedzisa mabasa ekushambadzira muUnited Arab Emirates (UAE) nezuro, nemusangano wakakosha nevakuru vakuru veEmirates Airlines pamuzinda wavo weDubai.
Chikuru chehurukuro yaive mukana wekuunza sevhisi yakakosha pakati peDubai neJamaica, mukupemberera Zuva reJamaica paExpo 2020, Dubai muna Kukadzi 2022.
Paive zvakare nehurukuro ine pundutso pamusoro pekushanya uye tarisiro yekudzoreredza ndege.
Dzimwe nhaurirano dzinotarisirwa kugonesa kubatana kwakazara kweEmirates nevamwe vanodyidzana navo kuMiddle East.
Chinhu chikuru chenhaurirano yakakura yaive mukana wekuunza sevhisi yakakosha pakati peDubai uye Jamaika, mukupemberera Zuva reJamaica paExpo 2020, Dubai muna Kukadzi 2022. “Takabvumirana kuongorora kugona kuronga ndege iyi, izvo zvinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvinobvira. Pakavewo nenhaurirano ine pundutso pamusoro pekushanya uye tarisiro yekudzoreredza ndege uye yakanaka V-chimiro chimiro chiri kuwanikwa neJamaica neDubai, "akadaro Bartlett.
Anotarisira dzimwe nhaurirano mumamiriro ezvirongwa zvekuenda kwakasiyana-siyana zviri kugadzirwa kuchamhembe kweCaribbean kugonesa kubatana kwakazara kweEmirates nevamwe vanodyidzana navo kuMiddle East. Emirates ndiyo huru ndege muUAE, uye kuMiddle East zvakazara, kushanda pamusoro pe3,600 ndege pasvondo.
Vari muUAE, Minister Bartlett nechikwata chavo vakasanganawo neTourism Authority kuti vakurukure nezvekubatana kwekudyara kushanya kubva mudunhu; Middle East tourism initiatives; uye gedhi rekupinda kuNorth Africa neAsia uye kufambisa ndege. Paivewo nemisangano nevakuru veEMAAR, ingangove iyo yakakura uye ine mukurumbira wekugamuchira vaeni uye Real Estate/Community developer muMiddle East; DP World, imwe yemakambani makuru epasirese echiteshi chengarava uye marine logistics; DNATA, iyo imwe hombe yekushanyira mufambisi muUAE uye TRACT, ane simba anoshanya anoshanda muIndia.
“Kutenderera kwezviitwa zvekushambadzira ini nechikwata changu nevekushanyirwa uye kutakura zvinhu muUAE, kwakabudirira zvikuru. Izvi pasina mubvunzo zvinozokonzera nzira yekuwana mari itsva, misika nemasuwo kubva kuMiddle East, Asia/Asia Minor neAfrica kuenda kuJamaica nedzimwe dzose dzeCaribbean,” Gurukota Bartlett vakatsanangura.
Kubva kuUAE, Mutungamiri Bartlett achaenda kuRiyadh, Saudi Arabia, kwaanozotaura pa5th edition ye Future Investment Initiative (FII). FII yegore rino ichasanganisira hurukuro dzakadzama nezvemikana mitsva yekudyara pasi rose, kuongororwa kwemaitiro emaindasitiri, uye kushamwaridzana kusingaenzaniswi pakati pemaCEO, vatungamiriri venyika, uye nyanzvi.
Vachabatanidzwa naSeneta, Hon. Aubyn Hill pachinzvimbo chake seGurukota asina Portfolio muBazi reKukura Kwehupfumi uye Kusikwa Kwebasa (MEGJC), aine basa reMvura, Nyika, Bhizinesi Process Outsourcing (BPOs), Special Economic Zone Authority yeJamaica nemapurojekiti akakosha.
Minister Bartlett vachadzokera kuchitsuwa neMugovera, Mbudzi 6, 2021.